Ogaden News Agency (ONA) – Rag ku eedeysan farsameyn qaraxyada oo la soo taagay maxkamadda dambiyada culus.
Rag ku eedeysan farsameyn qaraxyada oo la soo taagay maxkamadda dambiyada culus.
Posted by Daljir	/ March 18, 2018
Rag ku eedeysan farsameyn qaraxyada oo la soo taagay maxkamadda dambiyada culus
Seddex qof oo ku eedeysnaa farsameynta qaraxyada ayaa la soo taagay maxkamadda ciidamada qabaka sida ee dowladda Soomaaliya, kadib markii dhowaan ciidamada ammaanka ay sheegeen in ay ku soo qabteen howl gal ay ka sameeyeen deegaanka Ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha hoose.
Eedeysanayaasha ayaa lagu kala magacaabaa Maxamad Cabdiraxmaan Maxamuud, Jamaal Maxamad Cali Cabdi iyo Axmad Aadan, isla markaana maxkamadda ku eedeysay in ay ka tirsan yihiin Ururka Al-Shabaab.
Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha maxkamadda darajadda koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ka codsaday xafiiska xeer ilaalinta in ay keenaan baarihii kiiskan, si su’aalo loo weydiiyo, waxaana sidoo kale ay fursad u heleen qareenada in ay su’aalo weydiiyaan baaraha kiiskan.
Sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo bandhigay muuqaal iyo sawiro laga soo qaaday agab lagu farsameyn jiray qaraxyada oo lala soo qabtay saddexda eedeysane, waxanaa garsoorka ciidamada qalabka sida ka codsadeen in loo ogolaado in la soo geba-gabeeyo kiiskan oo ay sheegeen in ay ku filan tahay cadeymaha la keenay.
Qareenada difaacayay eedeysanayaashan ayaa maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto oo lagu xukumo sanado, iyagoo adeegsanayo qodobo oo ka mid tahay in cadeymaha la hor keenay maxkamadda aysan dhameystirnayn.